Ukusetyenziswa kweMguquleli ngakumbi ngesiNgesi
Indlela yokusebenzisa lo Mhleli
I-modifier ngaphezulu isetyenziswa ngokuqhelekileyo ngesiNgesi kwiimeko ezahlukeneyo. Mhlawumbi uyazi ngokusetyenziswa kwamanye kwifomu ethelekisayo, kodwa kukho nezinye izinto ezisetyenziswayo. Ngezantsi uzakufumana iinkcazo zeendlela ezininzi ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukuguqula izibizo, kunye nefomu ethelekisayo kunye nesibhengezo. Oku kwahluke ngakumbi kunako (oku) okuninzi ongayifunda malunga neli phepha elizinikele ekusebenziseni ininzi yesiNgesi.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo 'kokuninzi' kwifom eqhathanisiweyo . 'Okuninzi' isetyenziswe ngezichazi zezilwimi ezingaphezulu kwesinye - ngaphandle kwezichazi eziphela 'y' - ukubonisa ukuba kukho ubuninzi obunjani. Qaphela ukuba okungafaniyo 'ngaphantsi' kusetyenziswa ngendlela efanayo ukubonisa ukuba kuncinci umgangatho othize (Olu hambo luyingozi kakhulu kunalowo esithatha ngesonto eledlule.)
Inqanaba lam yembali linomdla ngakumbi kuneklasi yam math.
INew York iyabiza ngakumbi kunokuba iTtletle ityelele.
Okunye + iNoun = Umnqumli
'Ngaphezu' kufakwe phambi kwesibizo njengomnqumli ukuchaza ukuba kukho into ethile. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-preposition 'ye' ayisebenzisi xa uthetha ngokubanzi. Khumbula ukuba ifom yobuninzi isetyenziswe xa uthetha ngokubanzi malunga nezinto ezibalawuliweyo okanye abantu (kukho abafundi abaninzi kulo nyaka). Xa uthetha ngezinto ezingenakubalwa, sebenzisa ifom yangasinye (Sidinga irayisi ngaphezulu).
Kubalulekile ukutya iziqhamo ezininzi ekudleni kwakho ngexesha lehlobo.
Kukho iincwadi ezininzi zokufunda kwigumbi elilandelayo.
Ngaphezu kweDeterminer + Noun
'Okunye' kusetyenziswa ngamanqaku kunye nezinye iinqununu xa uthetha ngento ethile okanye iqela. Oku kuyinyaniso kubantu kunye nezinto. Khumbula ukuba 'it' isetyenziswe ukubonisa into ethile ukuba umphulaphuli kunye nesithethi bayaqonda, kanti 'i' isetyenziselwa ukuthetha ngento ethile ekuphulaphuli ukuba awunjani na umzekelo othile .
Unengcinga engaphezulu kunokuba uyayiqonda.
Ndiza kusebenzisa ngaphezulu kolu klasi ukuchazela eli lipheleleyo.
Kwezinye iziganeko, kucacile ukuba yiphi igama elithi 'ngaphezulu' liguqula. Ngokomzekelo, kwindawo yokutyela, umntu onokulinda unokubuza ukuba ungathanda ukubhekisela kwikhofi, amanzi, njl. Ukuba umongo ucacile ukuba isibizo singasuswa.
Ngaba ungathanda ngaphezulu? - Ewe, ndingathanda kakhulu. (Umama uthetha nomntwana malunga nekhekhe)
Ndinqwenela ukuba ndininzi, kodwa uqoqosho lunzima kule mihla. (Umhlobo uthetha ngemali)
Inombolo + Ininzi + yeNoun + Engapheliyo
Inombolo esetyenzisiweyo ngokulandelwa sisibizo kunye nokungapheliyo kubonisa ukuba bangaphi / baninzi kangakanani / ukwenza ntoni ngomsebenzi othile. 'Enye enye ... yokwenza' inokutshintshwa 'kwenye ... ukwenza.'
Kukho iimvavanyo ezintathu zokulungisa namhlanje.
UJennifer udinga ezinye iikhredithi ezimbini zokugqiba.
Eninzi ingasetyenziselwa njengesibhengezo ukubonisa ukwanda kwenzo okanye ukuvakalelwa. Okuchasene nale fomu 'kuncinci' (oko kukuthi ndimthanda kakhulu imihla ngemihla.) OKANYE ndimthanda kangako yonke imihla.)
Ndimthanda ngakumbi xa ndimbona.
Ufuna ngakumbi xa ndithetha naye.
Ibinzana elithelekisayo 'ngaphezulu nangakumbi' ngaphambi kokuba isichazi sisetyenziswe ukuthetha ukuba into okanye umntu ukhula ngokuya kuba yindlela ethile.
Ngamanye amagama, xa uchaza ukuba kukho ukukhula okuthe tye kwinto ethile kusetyenziswa ibinzana elithi 'ngaphezulu nangaphezulu' phambi kwesiphakamiso. Okuchasene nale binzana 'kuncinci' ukubonisa ukuba into eyanciphayo (oko kukufumana imali ephantsi ukuthenga ikhomputha.)
Kuya kuba nzima ngakumbi ukufumana umsebenzi.
UPeter ufumana ukhathazeka ngakumbi malunga nokuhlolwa kwakhe kokugqibela.
Ukusebenzisa 'iPero' kunye ne 'Sino' ngokuba 'Kodwa'
Izahlomelo zokufanisa zesiFrentshi: Indlela abayilwe ngayo
"Phuma Kwi-Manger" Iingoma kunye neeChords
Megalodon - I-Monster Shark Lives! (Akunjalo)